Palitao ririnina, Palitao ivelany ho an'ny lehilahy, palitao miaro amin'ny rano - Qinghua
Ny orinasanay dia ny filan'ny mpanjifa sy ny famolavolana akanjo, ny teknolojia, ny lamba mitambatra, natomboka tsy tapaka mifanaraka amin'ny toetran'ny mpanjifa manokana momba ny famolavolana akanjo.
Izahay dia orinasa manondrana akanjo mahery, miasa ny orinasa manondrana varotra ivelany mandritra ny taona maro, indrindra amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, fitantanana tanora lahy sy vavy ambony. Ny orinasanay dia ny filan'ny mpanjifa sy ny famolavolana ny fitafiana, ny teknolojia, ny lamba mitambatra, natomboka tsy tapaka amin'ny toetran'ny mpanjifa manokana momba ny famolavolana akanjo, arakaraka ny tena ilain'ny vahiny hanamboarany (toy ny: fomba, teknolojia manokana, takian'ny vidiny… )…
Manana ekipa teknika matanjaka amin'ny indostria izahay, traikefa matihanina am-polony taona maro, haavon'ny endrika tsara indrindra.
Mampiasa ny rafitra famolavolana mandroso sy ny fampiasana ny fitantanana rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena mandroso ISO9001 2000 ny orinasa.
Ny orinasa dia manokana amin'ny famokarana vokatra avo lenta, hery ara-teknika matanjaka, fampandrosoana matanjaka, serivisy teknika tsara.